Kenya oo heegan gelisay ciidamada amaanka ee magaalooyinka waaweyn – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Nairobi: Ammaanka magaalooyinka waa weyn ee wadanka Kenya, ayaa maanta aad loo adkeyay si looga hortago iney ka dhibaatooyin inta lagu gudo jiro fasaxa Christmas iyo dabaal-dagayaan sanadka cusub 2015.
Afhayeenka Ciidamada Bilayska Kenya, Zipporah Mboroki ayaa sheegay in maanta aad loo adkeyay ammaanka magaalooyinka waa weyn ee dalka Kenya oo dhan, isla markaasna dib loo howl-galiyay ciidamo fara badan oo Boolis ah kuwaasoo xitaa qaarkood laga jooji-yay fasaxyo ay ku jireen si ay oga qeyb qataan sugida amniga, inta ay socdaan damaashaadyada Kirismaska iyo Sanadka cusub sida uu sheegay.
“Feejignaan sare ayaa la galiyay dhammaan ciidamada Kenya, waxaana lagu amray inay tillaabo ka qadaan cid kasto oo ay falal argagaxiso oga shakiyaan, isla markaasna waxaan lagu amray ciidamo badan oo fasax ku maqnaa iney dib shaqada ugu soo laabtaan oo ay sugida amniga ka qeyb qataan ayuu yiri,” Afhayeenka Ciidamada Bilayska Kenya.
Dhanka kale, dowlada Kenya ayaa ka codsaday dadka Kenyaanka ah iney ka digtonaadaan inta lagu jiro dabaal-dagyada wax kasto oo dhibaato u keeni karo, isla markaasna waxey dowladu sidoo kale ka codsatay shacabka iney ku wargaliyaan laamaha amaanka hadii arkaan wax khatar sababi karo.
Magaalada Mombasa aee xarunta gobalka xeebta ayaa sidoo kale maanta kor loo qaaday sugida amnigeeda waxaana la geeyay ciidamo tiro badan, ayadoona ay ku soo beegmeyso adkeynta amniga xili dadka Masiixiyiinta ah ay maanta u dabaal dagayaan Munaasabada Kirismaska, isla markaasna waxey sidoo kale ku soo aadeysaa ayadoo shalay xilka Wasiirka arrimaha gudaha Kenya loo dhaariyay Joseph Nkaissery oo horay loogu magacaabay xilkaas oo laga qaaday Wasiirkii horay jagadaas u hayay Joseph Ole Lenku.
Wasiirka cusub ee arrimaha gudaha Kenya Joseph Nkaissery, ayaa isna hadal uu warbaahinta ugu tala galay markii xilka loo dhaariyay kadib wuxuu ku sheegay inuu ka qaaday Jaziirada Laamu ee ka tirsan gobalka xeebta Kenya Bandowgii saarnaa, balse wuxuu sheegay iney sii joogi doonaan ciidamada halkaas ku sugan.